Kuyaziwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, umuntu kukhona amaphethini athile ukuziphatha, izimpendulo, ukuziphatha stereotyped ezaziwayo. Nokho, isifanekiso nakho kungaba indlela yokucabanga. Ngenxa yokuthi ukuqaphela kwethu ulwela ukuphila kwakho kube lula, kudala amaphethini athile, ngaphansi okuyinto ilungisa ngokoqobo ezizungezile. Ngokuvamile, lezi eyeqisayo ngalutho esingokoqobo, kodwa bayaqhubeka siphikelela enviable "ukuhlela" ekuphileni kwethu. Okunjalo amaphethini stereotyped yokucabanga abizwa ngokuthi "ukuhlanekezela izinto engqondweni yethu" futhi kakhulu lula umsebenzi bayazi, ngokushesha ulenga amalebula ezimweni ezithile. Isibonelo engaguquki ezifana zingakhiqiza umphumela Dunning-Kruger, okuyinto efakazela ngokucacile ukuba semthethweni izitatimende: "Maye - kusukela engqondweni"
Lapho wazi okwengeziwe - kulapho uyaqaphela awazi lutho
Ngingumfana ukuthi abantu abaningi abafunde kakhulu abafuna ukufunda okuqhubekayo, wabanjwa ngizibuze ukuthi ulwandle phambi kwabo ayikaziwa, futhi zonke amakhono abo - nje ephonsa olwandle, futhi namanje kangaka ukufunda ku ... Futhi ngesikhathi esifanayo, ngamunye isinyathelo sihlangane, uma sikubeka kahle, hhayi abantu abanekhono kunabo bonke ngasizathu simbe ngokuqinile beqiniseka zamakhono awo negunya lawo. Abantu abanjalo akuvamile uhlupho inkinga yokuthola ulwazi olwengeziwe, kodwa bayakulangazelela ukukhombisa uchwepheshe imibono yabo ngasiphi ithuba. Ukuze uthole incazelo eningiliziwe abantu anjalo Psychology nomphakathi, kukhona elithi ekhethekile - Dunning-Kruger umphumela.
Incazelo Fairy nomen
Abantu ngenhla ngenxa ukuhluleka kwabo kaningi ukwenza amaphutha (ikakhulukazi ekukhiqizeni), kodwa ngeke bakubone lokhu unecala - noma kunalokho, akazange abheke imbangela izinqumo ezimbi yolwazi ngemadlana yabo engatheni. Abanjalo izimpawu revaluation yolwazi siqu namakhono. Abakwazi ukubona ukuthi omunye umuntu kungenzeka bafaneleka kangcono, futhi kungaba kuwufanele ukufunda. Futhi, abakaze bayavuma ukungazi. Nokho, umphumela Kruger kudlulela omunye isigxobo: kakhulu ochwepheshe abafanelekayo bavame ukululaza amakhono abo, mancane enokuzethemba ngokucophelela ahlaziye zonke izinqumo.
Dunning-Kruger umphumela: kubangela ukuhlanekezela
Kungani lokhu kwakwenzeka? Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ukungazi akusho ezinokwethenjelwa, kodwa kwenzeka. Cishe, cabanga ngendaba isinxephezelo. Njengoba amakhono bokusungula Okuqukethwe akuzwakali ungavumeli abantu abanjalo ukuba uqaphele umuzwa wokuzibona sibalulekile, bona isinxephezelo yokuntuleka ulwazi ukuzazisa okusezingeni eliphezulu kanye nokuzethemba. Futhi abanye zihlale ukungazi ebonakalayo esachazwa abantu, kodwa ngokwalo - akukho. Empeleni ngibabheka njengomndeni bakholelwa ukuthi umbono uchwepheshe. Eqinisweni Dunning-Kruger umphumela kuyinkinga enkulu ezweni lanamuhla, ngoba wamabhizinisi abathwali kakhudlwana futhi evame kakhulu yokusebenzisa Ukuhlanekezelwa engqondweni yethu ukuthi akuzona indlela engcono kakhulu kuthinta iqophelo ukukhiqizwa. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela emhlabeni zomsebenzi umxhwele esikusize ngendlela lo mphumela. abantu abangafundile ezwakalisa "onegunya" imibono yabo nakwezinye izindawo eziningi: ezombusazwe, nokuphila emphakathini nokunye.
Ukuzidla - Iyini? Kanjani ukuqhosha?
Republic of Guyana (inhlokodolobha - eGeorgetown): ezokungcebeleka, ezikhangayo
Inkokhelo izinhlelo: uhlu izimiso
Wasemuva Russian Alexander Sazonov: Biography nokufeza
Lashizi kuhhavini. Ukwenza izaqheqhe nge semolina kuhhavini
Umuthi 'Matar Plus ": yokusetshenziswa, ukwakheka, incazelo kanye nokubuyekeza